09/01/14 ~ MM Daily Star
တပ်မတော်အရာရှိ ဟန်ဆောင်ကာ ငွေကြေးလိမ်လည်သူ လေးဦးတ...
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ လိုင်း...
စစ်အာဏာရှင်များ ကံစမ်းမဲပေါက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာလေသ...
စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးလို့…. တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတယ်.....
ဒေါ်စု နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာနေသည့် ဗိုလ်ခ...
UNFC က ထွက်မယ်လို့ ခပ်ရှင်းရှင်းထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ …ေ...
မိန်းမတွေ မူးလာရင် ဘာတွေပြောတတ်ကြသလဲ
ကာလသား ရောဂါနဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် (အမေးအဖြေ)
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ပါဝင်ပတ်သက်သော မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖေ...
မော်ရိုကိုတွင် ဓားထိုးခံရသည့် ဗြိတိန်မိန်းကလေး မိမ...
23:00 ဘာသာရေး No comments
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း စတင်ဆယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းမှု ၂၃ ရက်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပြီး ကုန်း ပေါ်ရောက်မှသာ ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းအစစ်ဟုတ်၊ မဟုတ် သမိုင်းပညာရှင်များက စစ်ဆေး ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြော သည်။
‘‘ဦးစံလင်းက ဖုန်းဆက် တယ်။ ကျန်းကျန်းမာမာရှိတယ်။ ပြည်သူတွေကို မေတ္တာနဲ့ခဏ စောင့်ပေးပါလို့ပြောတယ်’’ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။
‘‘ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက သင်္ဘောချည်တဲ့ ဗော်ယာတွေ ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ သူ့အဆင့်နဲ့သူ အများကြီးရှိတယ်။ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောတွေချည်တဲ့ ဗော်ယာဆို ရင် A Class သတ်မှတ်ထား တယ်။
အချင်းက ၁၀ ပေလောက် ရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ရေဝင်ပြီး တော့ မြုပ်သွားတာတွေ၊ မဆယ် နိုင်တော့လို့ နုန်းအောက်ရောက် သွားတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီဗော်ယာကြီးတွေက ခေါင်း လောင်းကြီးနဲ့ ထုထည်တူနိုင် တယ်။ အလေးချိန်ကတော့တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ဒီဗော်ယာကြီးတွေက အထဲက ဘာမှမပါဘူး။ အပေါ်မှာ ချည်တဲ့ကွင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုခေါင်းလောင်းရှာတဲ့ ရေငုပ် သမားတွေအနေနဲ့ ဒီဗော်ယာ အဟောင်းတွေကို ကြိုးသိုင်းပြီး တွေ့ပြီလို့ပြောနေတယ်လို့ထင် တယ်’’ဟု ရေကြောင်းအရာရှိချုပ် ဟောင်း စည်သူဦးကျော်သိန်းလွင် က ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် အင် တာဗျူးတွင် ဖြေကြားထားသည်။
22:00 ဘင်္ဂလီ အရှုပ်တော်ပုံများ, သတင်း No comments
20:00 သတင်း, သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် သြဂုတ်လ ဒုတိယပတ်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ရောင်း
ဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးထံမှ ကျပ် သိန်း ၄၀ ကျော်ကို တပ်မတော်အရာရှိများ ဟန်ဆောင်
လိမ်လည်ခဲ့သော အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူး အယောင်ဆောင် သူ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကို
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
19:47 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်လူဦးရေးစာရင်းကောက်ခံသည့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အားဘင်္ဂလီများမှ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လာ၍ သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲရ
19:00 ဘင်္ဂလီ များ, ဘင်္ဂလီ အရှုပ်တော်ပုံများ, သတင်း No comments
မောင်တောမြို့ လောင်းဒုံကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဂေါင်းကျေးရွာတွင် ဒုရဲမှူးဇော်ညွန့်ဦးစီး
ပါ ၁၀ဦး လ၀က(မကဖ) ဦးစီးအရာရှိဦး ရဲအောင်ပါ နှစ်ဦးတို့သည် လောင်းဒုံကျေး
ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲကျော်၊ရာအိမ်မှူးမာ မတ်အာလောင်၊ ကာမာဟူစိန်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး အိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်း ရှောင်တခွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေစဉ် ဘင်္ဂလီ ၃၀၀ခန့်မှ ဒုတ်၊ဓား၊ လှံ၊ ထမ်းပိုး များ ကိုင်ဆောင်ပြီး ၀ိုင်းရံလာသဖြင့် ဒုရဲမှူး ဇော်မြင့်ဦးစီးအဖွဲ့မှ သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်၍ ၁၃ ချက်သတိပေးခြောက်လှန့်ပစ်ဖေါက်လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ်လ၂၉ရက်၊နံနက်၁၀း၀၀နာရီအချိန် ကတည်းက စတင်ကာ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းရှောင်တခင် စစ်ဆေးခဲ့ရာ တွင် နေ့လည် ၂ နာရီခွဲ အချိန်ထိ ရွာသူ၊ရွာသားများ လာရောက်စစ်ဆေးခံခြင်းမရှိသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများသည် မာမိတ်ဆီဒိတ်(၄၀)နှစ်(ဘ)ဘာဆာမျာ၏ ခြံဝင်းအတွင်းနေအိမ် ၃ အိမ်အား ၀င်ရောက်စစ်ဆေးစဉ် ၄င်း၏ ညီအစ်ကို ၀မ်းကွဲတော်စပ်သူ မာမိတ်ဟူဆောင်း (၃၉)နှစ် ဆိုသူဝင်ရောက်လာပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းတစ်ခုသာထုတ်ပေးပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုစာရင်းတစ်ခုအားတောင်းခံရာမပေးဘဲ ဇနီးဖြစ်သူဇူလာဟတ်ထံမှဓားတောင်း၍ ဓားပြဟုအော်ဟစ်ကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း၊
ဓားပေးလာသော ဇူလာဟတ်မှ ရဲတပ်သား ပြည့်ဖြိုးဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ်ရာ အချိန်မီ ရှောင်တိမ်းနိုင်သဖြင့် ခုတ်မိခြင်းမရှိဘဲ ဇူလာဟတ်မှာလည်း ဓားကိုင်ကာ ရွာထဲသို့ထွက်ပြေးပြီး ဓားပြဟုအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာသူ၊ ရွာသား ၃၀၀ခန့်မှ ဒုတ်၊ဓား၊ လှံ၊ ထမ်းပိုး များ ကိုင်ဆောင်ပြီး ၀ိုင်းရံလာသဖြင့် ဒုရဲမှူး ဇော်မြင့်ဦးစီးအဖွဲ့မှ သေနတ်မိုးပေါ်ထောင်၍ ၁၃ ချက်သတိပေးခြောက်လှန့်ပစ်ဖေါက်လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
ရဲတပ်သားအား ၀င်ရောက်ဓါးဖြင့်ခုတ်သူ ၃ ဦးမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ယခုဖြစ်စဉ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသေအပျောက်မရှိ ၊ဒဏ်ရာရရှိခြင်းလည်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက ဒုချရားတန်းကျေးရွာတွင် ကင်းလှည့်ရဲတပ်ဖွဲ့အား ရွာသားများ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရာတွင် လက်နက်နှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အောင်ကျော်သိန်း မှာ ယခုအချိန်အထိ သတင်းအစအန မရသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
From: Arakan News Online
18:00 မြင်သမျှ ပြောမည် No comments
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီကော်မတီက ဘာအလုပ်မှ လုပ်တာ မရှိဘူး။ ငါတို့လုပ်လိုက်ရင် အစိုးရ နာမည်ရသွားလိမ့်မယ် ဆိုပြီး သဘော ရှိလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီကော်မတီက အလုပ်တွေအများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒါကို သူတို့ မလုပ်ဘူး” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက Hot News ဂျာနယ်အား ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး လာမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နောက်ထပ် တစ်စောင် တင်သွင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က မကြာသေးခင်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက် မည်မည်ရရ မရှိပုံကို ဦးလှဆွေက ဝေဖန်ခဲ့ရာ၌ ”ကျွန်တော်ပါတဲ့ ကော်မတီဆိုရင် ဥပဒေ(၂)ခု ရေးဆွဲတယ်။ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတယ်။ တိုင်စာတွေအတွက် ခေါ်ပြီး ကြားနာတယ်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ဖို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မတီက အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုရင် မဆိုးဘူး။ အခု တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မတီက ဘာတစ်ခုမှ မယ်မယ်ရရ လုပ်တာမတွေ့ရဘူး လို့ ပြောချင်တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌအဖြစ် ပါဝင်သော ယင်းကော်မတီသည် တရားစီရင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များသာ ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်မှုများ ခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒါက သူ့ကော်မတီမှာ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့သူ မရှိဘူးလေ။ လက်ပံတောင်းကော်မတီတုန်းက လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တယ် ဆိုတာ ကြံ့ခိုင်ရေးကအမတ်တွေ၊ အစိုးရ အရာရှိဟောင်းကြီးတွေ၊ အကုန်လုံး သူတို့ လုပ်သွားတာ။ NLD ပါတီမှာ အရည်အချင်း ပြည့်မီတဲ့သူ မရှိဘူး။ ဒေါ်စုကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက သုံးစားမရဘူး။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်တောင် သူ့ကော်မတီအလုပ်တွေ မည်မည်ရရ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုမှတော့ အောက်ကလူတွေ ဆို ပြောစရာကို မရှိနိုင်တော့ဘူး။ လွှတ်တော်ထဲမှာ NLD အမတ်တွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ လေ့လာကြည့်ရင်လည်း အခါကြီးရက်ကြီးတွေ နာမည်ပြောင်းဖို့ တို့၊ ခေါင်းပေါင်းချွတ်ခွင့် တို့၊ ဒါမျိုးတွေပဲ ကြည့်လေ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့လို့လဲ။ ဒီတော့ ဦးလှဆွေ ပြောတာ မှန်တယ်ဗျ” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လွှတ်တော်အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းနေပြီး NLD ပါတီအနေဖြင့်လည်း လူအစားထိုးနိုင်ရန်အတွက် လွန်စွာမှပင် ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စစ်အာဏာရှင်များ ကံစမ်းမဲပေါက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာလေသလော.... ??
စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀မှာ …
စစ်ပညာပိုင်းကို သင်ကြားတဲ့ အခါ …
ပထမနှစ်မှာ ဒုတပ်ကြပ် အဆင့် …
ဒုတိယနှစ်မှာ အကြပ်ကြီး အဆင့် …
တတိယနှစ်မှာ အရာခံအဆင့် …
စတုတ္ထ နှစ်မှာ တပ်စုမှူး အဆင့် …
စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် သင်ကြားပေးလေ့ရှိတယ် …
အဓိက ကတော့ ….
ကျောင်းဆင်းတဲ့ အချိန် …
ခြေလျင် တပ်စုတစ်စုကို …
ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကွပ်ကဲပြီး …
တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ် …
ကျောင်းဆင်း အရာရှိဟာ …
ခြေလျင်တပ်မှာ တစ်နှစ်တန်သည် …
နှစ်နှစ်တန်သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးရင် …
ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း ပြန်တက်ရတယ် …
အဲတော့ ကျောင်းတုန်းကလဲ ….
တပ်စုမှူး အဆင့်အထိ စစ်နည်းဗျူဟာတွေ ….
တပ်စုမှူးသင်တန်းမှာ သင်တဲ့ စာက …
ကျောင်းတုန်းက စာ နဲ့ဘာကွာလဲ ….
ဘာမှ သိပ်မကွာဘူး …
နည်းနည်းလေးပဲ အဆင့်မြင့်သွားတာ …
ဒီစာက ဒီစာ …
ဒီနည်းဗျူဟာက ဒီနည်းဗျူဟာ ပဲ ….
အရမ်းကွာသွားတယ်လို့ လဲ ပြောလို့ ရတယ် ….
ဘာလို့ လဲ ….
အရင် ကိုယ်က ဒီစာကို ….
ဗိုလ်လောင်းဘ၀ နဲ့ သင်ခဲ့ရတာ ….
အခု ကိုယ်က လက်တွေ့ တစ်နှစ် နှစ်နှစ် ….
Field ထဲမှာကျင်လည်ပြီးသွားပြီ …
သီအိုရီ နဲ့လက်တွေ့ သဘောကို …
သီအိုရီကို ကိုယ့်လက်တွေ့ နဲ့ချိန်ထိုးသုံးသပ်ရင်း …
ကိုယ်လေ့လာနိူင်ရင် လေ့လာနိူင်သလောက် …
ကိုယ် စွမ်းရင် စွမ်းသလောက် …
ပိုပို မြင်လာ သဘောပေါက်လာရတယ် ….
Field ထဲကို ပြန်သွား ….
ဗိုလ်ကြီး ဖြစ်တဲ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် …
ပြီးရင် GAQ3ဆိုတဲ့....
Staff တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရတယ် ….
ရုံးလုပ်ငန်းတွေ အဓိကလုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် …
တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ကို …
အမိန့် ပေးအဖွဲ့ (Command Group ) မှာ …
G3အများစုဟာ ….
တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေး သင်တန်းတက်ပြီးမှ …
ဒီနေရာကို တာဝန်ပေးတာဖြစ်လို့…
သင်တန်းတုန်းက သင်ရတဲ့....
စာတွေ့ သဘောတရားကို …
ဒီ Command Group မှာ …
လက်တွေ့ ပြန်လုပ်ပြီး ...
အတွေ့ အကြုံ ယူရတဲ့ သဘောပဲ ….
သူများတွေတော့ မသိ …
ဒီ တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းဟာ …
ကိုယ်တွေရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်ကို …
အမြစ်ကစလှန်ပြီး ပြောင်းပြစ်လိုက်သလိုပဲ …
ဒီသင်တန်း မှာ သင်ရတဲ့…
ထောက်လှမ်းရေး စက်ဝန်းလည်တဲ့သင်ခန်းစာမျိုးဟာ …
ကြေးနန်းတွေ ပလူပျံအောင်ဝင် …
၀င်လာတဲ့ သတင်းတွေကို ချက်ချင်း မြေပုံတင် …
ကိုယ့်လက်အောက်က တပ်တွေကို …
သူ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းပြန်ချပြ…
လိုအပ်တဲ့အမိန့် ပေး ကြေးနန်းတွေ ပြန်ထုတ် …
ကိုယ့်တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေ မြေပုံတင် …
တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တွေ မြေပုံမှာ ရေးမှတ် …
ရန်သူ့ သတင်းပေါ်တဲ့ နေရာတွေ မှတ်သား …
သုံ့ ပန်းမိတဲ့ ကြေးနန်းမျိုး ၀င်လာရင် …
သူ့ နဲ့ အနီးဆုံး တပ်ထိန်းတပ်ဆွယ် ..
ဒါမှမဟုတ် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ကို …
ရန်သူကို စစ်ကြောဖို့အမိန့် ပေးကြေးနန်းတွေ ပြန်ထုတ် …
ခြုံခိုတိုက်ခံရတဲ့ကိုယ့်တပ်ဖွဲ့ ကို …
တစ်ခြားတပ်တစ်ခုနဲ့လူစားလဲထုတ်ဖို့ကြေးနန်း ပို့…
အထက်ဌာနကို အစီရင်ခံစာတွေ တင်ပြ ….
ဒီလို သင်ခန်းစာတွေကို …
နှစ်ရက် သုံးရက် ဆက်တိုက်လုပ်ရတာ…
ကိုယ့်ဖာသာ မခံနိူင်လို့အိပ်ချင်လဲအိပ် …
ဒါပေမယ့်ဒီ ဖြစ်စဉ်ကြေးနန်းတွေကတော့ …
နေ့ ရော ညရော ….
နာရီဝက် တစ်ကြိမ်လောက် ပုံမှန်ဝင်နေမှာပဲ ….
စက်ဝန်းလည်ပြီ ဆိုတာနဲ့…
သင်တန်းသား အရာရှိတွေဟာ ….
သုံး လေးရက် ညမအိပ်ရလို့…
မျက်တွင်းဟောက်ပက် နဲ့…
ဘဲခေါင်းခြောက်ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ….
တိုင်းတပ်မ စစ်ဌာနချုပ်တွေမှာ …
Command & Control System …
ဘယ်လို လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကို …
အကြမ်းဖျင်း ရိပ်စားမိလာတယ် ….
နောက်ပိုင်း အသက်လေး နည်းနည်းရလာတော့မှ …
ဒီ ထောက်လှမ်းရေး စက်ဝန်းလည်တဲ့ သင်ခန်းစာဟာ …..
ပြည်ပ စစ် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် …
စစ်ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့….
စစ်ဦးစီးအရာရှိ Staff တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို …
War Game လုပ်ပြီး ….
အနီးစပ်ဆုံး တူအောင် ဖန်တီးထားတာမှန်း …
ဦးစီးအရာရှိ တာဝန်နဲ့….
စစ်ဌာနချုပ် ( Command Group ) မှာ …
ပြီးရင် ယာယီတပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်မှူးနဲ့…
လက်တွေ့Field ထဲ ပြန်ဆင်းရရော….
အာ့မှာက ကိုယ်က အမိန့် ပေးခံရတဲ့ နေရာ …
အမိန့် တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက် …
အကောင်အထည် ဖော်ရတယ် ….
အဲ …. မသေလို့…
ဗိုလ်မှူး အပွင့် တင်ပြီးသွားရင်တော့ …
စစ်ဦးစီးမှူး ဒုတိယတန်း G2 …
တစ်ခါ ကိုယ်က ....
အမိန့် ပေးတဲ့နေရာ ပြန်ရောက်တယ် ….
ပြီးရင် ရင်းမှူးသင်တန်းတက် ….
ဒုတပ်ရင်းမှူး ဘ၀နဲ့Field ထဲ ပြန်ဆင်း …
နောက် ယာယီ တပ်ရင်းမှူး …
နောက် Field ထဲမှာပဲ တပ်ရင်းမှူး ဖြစ် ….
ပြီးရင် စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် ကို တစ်နှစ်နီးပါး ပြန်တက် …
ပြီးရင် G1 ထွက်တယ် ….
Command Group ကို ပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီ ….
G1 ဘ၀ နဲ့စစ်ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း …
အတော်ကြာလာတဲ့ အခါ ….
ယာယီ နည်းဗျူဟာမှူး ဘ၀ နဲ့…
Field ထဲကို ပြန်ဆင်းရတယ် ….
Field ထဲမှာပဲ အပွင့်တင် …ဗျူဟာမှူးဖြစ် …
တစ်ခါ နိူင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်မှာ …
တစ်နှစ် ပြန်တက် …
အဲမှာ သင်တာတွေကျတော့ …
စစ်ပညာတင် မဟုတ်တော့ဘူး ….
နိူင်ငံရေး သိပံ္ပ ... အုပ်ချုပ်ရေးပညာ …
နောက် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့….
သူတို့ အတွေ့ အကြုံတွေ စာပြန်လာသင်ကြတယ် …
ပြည်ပက ပညာရှင်တွေလဲ ပါတယ် …
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့( ကာကွယ်ရေး ) ထပ်ပေးတယ် …
ပြီးရင် တပ်မမှူး ထွက် …
Field ထဲ ပြန်ဆင်း …
နောက် တိုင်းမှူး ထွက် ….
Command Group ကို ပြန်ရောက် …
ပြီးရင် ကစထမှူး ….
တပ်တော်မှူး အဆင့် …
မြန်မာပြည်ကို အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး …
တပ်တော်ကြီး ၆ခု နဲ့စစ်တိုက်ရမယ် …
အဲဒီ တပ်တော်တွေကို ကွပ်ကဲမှာက …
ဒီ ကစထ မှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ….
ညှိကွပ် ညှိနိူင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ( ကြည်းရေလေ ) က …
စစ်ပွဲအတွင်း ကြည်းတပ် ရေတပ် နဲ့ လေတပ်တွေအကြား …
ပေါင်းစပ် ညှိနိူင်းပေးတဲ့ တာဝန် ….
တပ်မတော်မှာ အဆင့်ဆင့် ….
Command Group မှာ တစ်လှည့် ...
Field ထဲ တစ်လှည့် ...
ဘယ်လို လေ့ကျင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာ …
ဒီစတေးတပ်စ်က ပြောချင်တာ သုံးချက်ရှိတယ် …
ပထမ အချက်က ….
ခင်ဗျားတို့ ထိုင်ထိုင်ဆဲနေတဲ့…
နကန်းတစ်လုံးမှ မတတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေကို …
အာ့လို လေ့ကျင့်ပေးထားတယ် …
လာလာ ဆဲနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ တွေရော …
ဘယ်လို လေ့ကျင့်နေလဲ …
ဘယ်လို လေ့ကျင့်ထားလဲ …. ??????
၂၂ နှစ်ကာလမှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့….
တပ်မတော် ရဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံ အသစ်ဟာ …
ပြည်တွင်းစစ်ကို ရည်ရွယ်သလား …
ပြည်ပစစ်ကို ရည်ရွယ်သလား ….
စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့ သူတိုင်း သိနိူင်တယ် …
ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေတဲ့…
အောက်ခြေကလူတွေကို ချစ်ပါတယ် …
အပေါ်ကကောင်တွေကို ကြည့်မရတာဆိုတဲ့စကားက ….
ပေါကြောင်ကြောင် စကားဆိုတာ ပြောချင်တယ်…
ဘာလို့ တုန်းဆိုတော့ ….
မဲပေါက်ပြီး အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ သူ…
တစ်ယောက်မှ မရှိ …..
အပေါ်မှာရော အောက်မှာပါ …
ကောင်းတဲ့ သူရှိတယ် …ဆိုးတဲ့သူရှိတယ် …
ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းကို …
အပေါ်အောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိူင်ဘူး ….
ဒါကို ပြောချင်တယ် ….
ခြုံငုံ သုံးသပ်နိူင်စွမ်း …
လူဆိုတာ ကိုယ်ကြည့်သလောက် မြင်တာပဲ …
ဦးစီးအရာရှိ G3 တစ်ယောက်ရဲ့ ရူမြင်ပုံ နဲ့….
မြေပြင်က တပ်ရင်းမှူးတစ်ယောက် ရဲ့ရူမြင်ပုံ မတူဘူး …
G3က သူ့ စစ်တိုင်း တစ်တိုင်းလုံး မှာ ဖြစ်နေတဲ့…
ကိစ္စတွေအပေါ်က ခြုံငုံ သုံးသပ်ရတယ် ….
တပ်ရင်းမှူး က ….
သူ့ တပ်ရင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ်က …
အဖြစ်အပျက်ကြီး တစ်ခုလုံးကို ပြောချင်ရင်တော့ …
Bird Eye View အပေါ်စီးကနေ …
အားလုံးကို ခြုံငုံ သုံးသပ်နိူင်ဖို့ လိုတယ် ….
ဥပမာ ၈၈ အရေးအခင်းလို ကိစ္စမှာ …
သေနတ်နဲ့ပစ်ခံရတဲ့လူအုပ်အကြောင်း …
ဒီမိုကရေစီ အကြောင်းပဲ တွင်တွင်ပြောနေပြီး …
သမိုင်းနောက်ခံ အခြေအနေ …..
ကွန်မြူနစ်ပါတီ နဲ့ယူဂျီ ….
မိုင်းယန်း နဲ့မဲသဝေါ …
အမေရိကန် ရေတပ်နဲ့မင်းမဲ့ စရိုက် …
နိူင်ငံရေးသမားချင်း အာဏာလုမှု …
ဒါတွေ အားလုံးကို …
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့် မသုံးသပ်နိူင်ရင်တော့ …
မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား ဆင်စမ်းသလို အဖြေ ပဲ …
ပေါ်ထွက် လာစေမှာပဲ ….
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သူတွေ ...
အရေးအခင်းကြီး တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံပြီး …
ရူမြင် သုံးသပ်နိူင်တဲ့ သူ အတော်နည်းတယ် …
မြန်မာ့နိူင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောလိုက်ရင်လဲ …
ကိုယ်လိုရာ ကွက်ကွက်လေးတွေ ….
လက်ညိုးထိုး Focus လုပ်ပြီး ….
သုံးသပ်နေကြတာ များတယ် ….
အလုပ်ဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းကို လိုချင်ရင် …
အတိတ် သမိုင်းကြောင်း …
အနှစ် ၆၀ ပြည်တွင်းစစ် ….
အရာအားလုံး အဖြစ်အပျက်အားလုံး …
ဘက် အားလုံးရဲ့ အမျိုးမျိုးသော ခံစားချက်တွေ …
ဒါတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား သုံးသပ်နိူင်မှ ….
အဖြေမှန်ကို ရမယ် ….
ဒီအတိုင်းထိုင်ပြီး တစ်ဖြဲ နှစ်ဖြဲ နဲ့….
စစ်အာဏာရှင် စနစ် ပြုတ်ကျရေး …
စစ်ခွေးများ ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ရေး ….
တွင်တွင် အော်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ …
ငပိန်းလို့ ပဲ မြင်တယ် …
စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့….. ။ ။
စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးလို့…. တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတယ်..... ???
စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးလို့….
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတယ်လို့…
အကြိမ်ကြိမ် စွပ်စွဲခံရပါများတော့ ….
ကိုယ် မီသလောက် ….
တွေ့ ကြုံဖူးသလောက် ကိစ္စတွေကို …
ပြန်ပြောစရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ် …
ပြည်သူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့…
ပထမဆုံး စပြီး အတွေးထဲ ၀င်လာတာက …
အမေ ပြောဖူးတဲ့တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးတွေ …
အမေက အာ့တုန်းက ….
မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်း ကော်ပရေးရှင်းက …
သာမန် စာရေးလေး ….
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ …
မဆလ အစိုးရက …
တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးတွေအတွက် ….
မြန်မာ့ အာမခံကော်ပရေးရှင်းကို …
ခိုင်းကျွဲ ခိုင်းနွားများ အာမခံ စီမံချက်ကို …
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေတယ် …
တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ အသက် …
ကျွဲနွားတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရင် …
ပြန်အစားထိုးနိူင်အောင် စီစဉ်ပေးတာ ….
တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများဆိုတာ …
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ….
ဖတ်စာမှာ တတွတ်တွတ် ရွတ်နေရတဲ့…
ကျေးဇူးရှင်တွေ မဟုတ်လား. …
ခိုင်းကျွဲ ခိုင်းနွား အာမခံဟာ …
စထားတဲ့ အချိန်မှာ သိပ်အောင်မြင်တယ် …
ရွာတွေမှာ လူတိုင်းထားကြတယ် …
မထားတဲ့ သူ မရှိ ….
ဦးကြီးတွေဟာ လယ်မစိုက်တော့ပဲ ….
ဒီ အာမခံကိစ္စပဲ …
ထိုင်လုပ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ် …
ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာလိုက်ဘူး …
ဒီအာမခံ လုပ်ငန်းကြီးဟာ …
နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ….
အလဲလဲ အကွဲကွဲ နဲ့ရပ်တန့် သွားတယ် …
မြွေပေါက်လို့…
ရောဂါဖြစ်လို့….
တစ်နှစ်တစ်နှစ် သေလိုက်တဲ့ နွားတွေ …
ထောင်နဲ့သောင်း နဲ့ချီတယ် …
မြန်မာ့ အာမခံက လျော်လိုက်ရတာ …
လက်ကို မလည်နိူင်ဘူး …
အောက်ခြေ ပါတီယူနစ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ …
ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ပုံ ရတယ် …
စကတည်းက ရှိမနေတဲ့နွားကို …
အာမခံ လာထားထားပြီး ...
တကယ်ရှိတဲ့ နွားကျတော့လဲ ....
တကယ်မသေတဲ့ ကိစ္စပဲ ….
ထောက်ခံချက်တွေ တစ်ထပ်ကြီး နဲ့ဒီနွားဟာ …
အာမခံထားပြီး သိပ်မကြာ …
နယ်မြေခံပါတီ ယူနစ် နဲ့….
တောင်သူဦးကြီးတို့ ရဲ့အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေ ….
မြွေ ဆယ်ကောင်လောက် တစ်ပြိုင်နက် ၀ိုင်းကိုက်ပြီး …
အနိစ္စသဘော နဲ့ကိစ္စချောတော်မူရှာတယ် …
ရက်စက်ယုတ်မာသော မဆလ နေ၀င်း အစိုးရ ခမျာလဲ …
သောက်သောက်လဲ လျော်တော်မူရရှာတယ် ….
ဒီ စီမံချက် ရပ်တန့် ချိန်မှာတော့ …
မြန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်းမှာ …
လည်သူ တောင်သမား ဦးကြီးများလို့ပဲ …
ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ကြတော့တယ် …
ဒုတိယ သတိထားမိတာတော့ …
မှောင်ခို ကိစ္စပဲ …
အာ့တုန်းက မန်းလေး -လားရှိုးက …
တစ်ညအိပ် ခရီးသွားရတဲ့ ကာလ …
အခန့် မသင့်ရင် ဓားပြ တိုက်ခံရတတ် သေးတယ် …
ဒါပေမယ့် ဓားပြထက်ပိုဆိုးတာက ခါးပတ်ကြား …
အာ့ဒါ ကာစတန် အကောက်ခွန် ကို ...
အာ့ခေတ်က ခေါ်တဲ့ ဗန်းစကား …
ဘာလို့ ခေါ်မှန်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ….
ကားတွေကလဲ အကုန်သယ်တယ် …
ပုဇွန်ကို မေဆွိ လို့ ခေါ်တယ် …
လိပ်ကို နင်ဂျာလို့ ခေါ်တယ် ….
ဘာမှ မချန် အကုန်သယ်တာ…
မူဆယ်ကို တိုက်ရိုက်မပေါက်တော့ …
လားရှိုးက တစ်ထောက်နားရပ် …
အာ့ခေတ်က ဟိုင်းလတ်ကားတွေက …
လက်နဲ့ သင်္ကေတ တွေ ပြရတယ် …
လက်မအောက်စိုက်ပြီး ခါပြသွားရင် …
နီးရာတောထဲ ၀င်ပုန်းတော့ …
အရှေ့ မှာ ခါးပတ်ကြားရှိတယ် …
ဒါပေမယ့် အာ့ခေတ်ကလဲ ….
ကားတွေ ရာနဲ့ ချီပြီး မှောင်ခိုတွေ ချခဲ့ကြတာပါပဲ …
မိတော့လဲ ညှိ …
ညှိ မရတော့လဲ ဖမ်းခံရ … ဒီလိုပါပဲ ….
တတိယ သတိထားမိတာက …
အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ဆော်ကြတယ် …
ခွင့်ပြုပေးတာက အကျင့်ပျက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ချို့…
တစ်ပျော်တပါးကြီး ကယ်ရီရိုက်ကြတာက အရပ်သားတွေ ….
ဒီဘက်က မြွေ လိပ် ကျောက်စိမ်း သစ် ….
ဟိုဘက်က တရုတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ….
ဒီလိုနဲ့ ပဲ လားရှိုးမူဆယ်လမ်းကြောင်းကြီး …
စတုတ္ထ သတိထားမိတာက …
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေ …
ကိုယ်တွေ ကျောင်းဆင်းလို့…
ရှမ်းမြောက်မှာ တာဝန်ကျတော့ …
ဘိန်းစိမ်းကို ချိန်ခွင်နဲ့ချိန်ရောင်းတာကို …
တအံ့ တသြ ရပ်ကြည့်ခဲ့ရဖူးတယ် …..
အာ့တုန်းက ဆေးပြားစက်တွေက …
လောက်ကိုင်မြို့ ရဲ့ အိမ်တွင်းမှု စီးပွားရေးပဲ …
နောက်ပိုင်း ဒကစလောက်ကိုင် လာဖွင့်တော့မှ …
အတော် ကိုယ်ရှိန်သတ်ကုန်တယ် …
အာ့တုန်းက ဖုန်ကြားရှင် ဒကစ ကို လာတိုင်း …
ဒကစမှူးက မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စကို …
အရမ်းဖိအားပေးတာ မှတ်မိနေသေးတယ် …
နောက်တစ်ခု ဖိအားပေးတာက …
သူခိုးမိရင် စာချိတ် ဈေးထဲ လည်ပြပြီး ...
လူလည်ကောင်မှာ ပစ်သတ်ပြတဲ့ ကိစ္စ ….
ဒကစမှူးက ရဲလက်ကို အပ်ဖို့…
ပဉ္စမ သတိထားမိတာက ….
နယ်စပ်ဒေသ အတော်များများမှာ …
အစိုးရ သြဇာမတည်တဲ့ကိစ္စ …
ချင်းရွှေဟော် ကျော်တာနဲ့…
ကိုးကန့် ဂိတ်က စ အခွန်ကောက်တယ် ….
ကိုယ်တွေ စစ်ကားကို တံခါးဖွင့်မပေးလို့….
ပစ်မယ် ခတ်မယ် ဖြစ်လုနီးပါး …
စကားများခဲ့ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ် …
တပ်နားက ဗြုံးတောင်ကို ဗြုံးတူးတော့ …
သူတို့ ပိုင်တဲ့ တောင်မို့ လို့မတူးရလို့ …
လာကန့် ကွက်တာ ကြုံရဖူးတယ် …
ရဲစခန်း ရှိပေမယ့် …
ရဲက အပြင်မထွက်ရဲဘူး …
ရဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆိုတာဝေးရော ….
တပ်က တပ်စိတ်တစ်စိတ် …
ရဲစခန်းမှာ အမြဲတပ်စွဲပေးထားရတယ် …
ရဲစခန်း နဲ့ကိုက်၁၀၀လောက်အကွာမှာ ..
ကိုးကန့် က လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့….
ညနေဆို လူအလုအယက် ထွက်ခေါ်နေတာ …
အာ့ရှေ့ ဖြတ်မလျှောက်ရဲ ….
ဗမာ မြင်ရင် …
ဘယ် ဒေါင်းဇား သင်ပေးသွားမှန်းမသိတဲ့…
ဗမာစကား အညစ်အပတ်တွေနဲ့…
လှမ်းလှမ်း ခေါ်တာမို့…
အာ့နားကို ညနေဆို …
ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးရှောင် …
ဝေရာမဏိ လုပ်ထားရဖူးတယ် …
ဆဋ္ဌမ သတိထားမိတာကတော့ …
ရှေ့ တန်း ထွက်ရင် တွေ့ ရတဲ့တောထဲက ရွာတွေပဲ ….
လောမီတာကွန် ( ဗမာဗိုလ်ကြီး ) ….
ခင်ညားတို့ဘိန်းခင်းတွေ ...
ဘာလို့ ဖျက်လဲ နားမလည်ဘူး …
ဘိန်းက အစေးကလဲ ဈေးကောင်းရတယ် ..
အရွက်ကလဲ စားလို့ ရတယ် …
အစေ့ကလဲ စားလို့ ရတယ် …
အရိုးကိုလဲ စင်းပြီး ကျွဲကျွေးလို့ ရတယ် ….
ခင်ညားတို့အစားစိုက်ဖို့ ပေးတဲ့....
ပန်းဂျုံက အလကားပဲတဲ့…
ကိုယ်တွေ လုံခြုံရေးလိုက်ပေးဖူးတဲ့…
ဂျပန် ပန်းဂျုံ စီမံကိန်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားရင် …
ကွကိုယ် သတ်သေသွားနိူင်တယ် …..
သတ္တမ သတိထားမိတာက …
အလွန်ခေါင်တဲ့တောထဲကရွာတွေ …
ကွမ်းလုံကို ရောက်ဖူးသူတောင် …
ရွာမှာ လက်ချိုးရေလို့ ရတယ် ….
ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်နေမှန်းမသိ …
သူတို့ ကိုယ်သူတို့တရုတ်ပြည်ကလို့ ထင်နေတဲ့…
ရွာ က ရှိသေးတယ် …
အဋ္ဌမ သတိထားမိတာက …
တပ်ကို တဂျိမ်းဂျိမ်းလာနေတဲ့…
စီးပွားရေးသမား လူတန်းစားတွေ …
ကိုယ်တွေ ထောက်လှမ်းရေးသာ ပျက်သွားတယ် ..
သူတို့ ကတော့ ပန်းပန်လျှက်ပဲ …
နောက်လူဆီ ဆက် ၀င်ထွက်ကြတယ် ….
လူကြီး သားသမီးတွေကို နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ခဲ့တဲ့...
အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့ ကြတဲ့အုပ်စုတွေ ….
လူကြီး သားသမီးတွေ နဲ့ ပေါင်း …
တိုင်းပြည်ကနေ ရသမျှ ခုတ်ကြ ခွာကြ …
လှီးကြ ချွတ်ကြ ယူကြတော်မူကြတယ် ….
န၀မ သတိထားမိတာက ….
လက်ဘက်ရည်ဖိုးတောင်းတဲ့လူတန်းစား ….
ဘယ်ရုံးသွားသွား ဘယ်ကိစ္စ လုပ်လုပ် …
လဘက်ရည်ဖိုးပေးမှ အဆင်ပြေတယ် …
မပေးရင် တတ်နိူင်သလောက် အချိန်ဆွဲ …
ညစ်ကြ ကပ်ကြ စုတ်ကြ ပဲ့ ကြတော်မူကြတယ် ….
၀န်ထမ်းလဲ ၀န်ထမ်းအလျှောက် …
ပွဲစားလဲ ပွဲစားအလျှောက် …
သူ့ ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပဲ …
ဒဿမ သတိထားမိတာကတော့ ….
ကွမ်းသွေးကို ဖြစ်သလိုထွေးတယ် ….
ကားပေါ်က အမှိုက်ချတယ် …
မီတာကို မလည်အောင် အကြံအဖန်ထုတယ် …
ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်း တို့ ပစ္စည်းလို့ ....
ကြွေးကျော်ပြီး သကာလ …
ညည မီးလုံးကို အပျင်းပြေခွဲပြီး …
ရပ်ထားတဲ့ကားတွေ …
ခဲနဲ့လက်တည့်စမ်းကြတယ် ….
ဒါ ကျွန်တော့် အသက်အရွယ်နဲ့…
လက်တွေ့ ကြုံခဲ့သိခဲ့ မီခဲ့သမျှတွေ …
အာ့တော့ ကျွန်တော် မေးချင်တာက …
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားတဲ့ကိစ္စက …
အစိုးရ အပေါ် ….
စစ်တပ်အပေါ်ပဲ တာဝန်ရှိခဲ့သလား ….
ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ …
ကျန်တဲ့ နိူင်ငံရေးသမားတွေ အပေါ်ရော …
ခင်ဗျားတို့ ကွကိုယ် မညာတမ်း ဖြေကြည့်စမ်းပါ …
တစ်ခါလာလဲ ၆၂ စစ်အာဏာသိမ်းတာ …
နှစ်ခါလာလဲ အနှစ် ၆၀ စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်လို့မွဲသွားတာ…
အံ့ သြဖို့ ကောင်းတာ တစ်ခုက ….
ဒီ ၆၂ အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အထဲပါတဲ့….
ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ ဟာ …
ဦးတင်ဦး ၊ ဦးကြည်မောင် ….
ဦးအောင်ရွှေတို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျတော့ …
ဒီ ပြည်တွင်းစစ်က ....
အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက်စခဲ့တာ …
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အများစုဟာ …
ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ဒီနိူင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ …
စစ်ဖြစ်တာလဲ ဒီအစိုးရ လက်ထက် …
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေ ....
ပေါ်လာတာလဲ ဒီအစိုးရလက်ထက် …
အင်းစိန် နဲ့ မန်းလေး ပါ အသိမ်းခံရတဲ့ အထိ …
အခြေအနေဆိုးခဲ့တာလဲ ဒီအစိုးရလက်ထက် …
ရိုဟင်ဂျာ အသံဆိုပြီး …
မြန်မာ့အသံ က လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ …
ဒီအစိုးရ လက်ထက် ….
၅.၁၂.၁၉၆၀ လွှတ်တော်မှာ …
ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး စပ်ရွှေသိုက်က ….
နိူင်ငံတော်ဘာသာလို့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ အတွက် ….
လူမျိုးတစ်မျိုး နှင့် တစ်မျိုး မုန်းတီး ရန်လိုကုန်ပြီး …
ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမလို ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ….
အစိုးရ အနေနဲ့သိပါသလားဆိုပြီး …
ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း မေးယူခဲ့ရတာလဲ …
ဒီ အစိုးရ လက်ထက် ….
ခွီး …..ပြီးတော့မှ စစ်တပ်ကပဲ …
တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် ဖြစ်ရသေး …
စစ်အာဏာရှင်တွေ ကောင်းကြောင်း ....
အပြစ်အားလုံး စစ်တပ်ကို ပုံချပြီး ….
ကိုယ်ကိုယ့်ကို ရွှေမင်းသမီးလေး …
ပူတူးတူးလေး လုပ်လို့ဝင်ဝင်ပြောနေရတာ …
အာစီယံမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်ချင်တယ် …
ဆုတောင်းလေ …ဆုတောင်း …
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူ ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့…
ငါတို့ စည်းကမ်းမရှိအောင် …
စာအုပ်တွေ မဖတ်အောင် …
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားအောင် …
စစ်အစိုးရက တမင်အကွက်ချလုပ်ခဲ့လို့…
ငါတို့ အခုလို ဖြစ်နေရတာဆိုတဲ့…
ပေါတောတော အယူအဆလေး အရင်ပြင်လိုက် …
တော်ကီတွေ သိပ်ပြစ်မနေနဲ့…
မြန်မာ့ နိူင်ငံရေး သမိုင်းမှာ …
ရွှေဘ ဆိုတာ မရှိ …
ချီးဘူး နဲ့အံ့ ကျော်ပဲ ရှိတယ် …
မှတ်ထား … ဒါပဲ ။ ။
ဒေါ်စု နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာနေသည့် ဗိုလ်ချူပ် ရုပ်ရှင်
ကျနော်က ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကို ယုံမှရိုက်တာ ....
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ထရိုက်လောက်အောင် ...
သိတယ်၊ တတ်တယ်၊ နားလည်တယ်လို့ ...
ကျွန်တော့် ကိုယ် ကျွန်တော် မယုံကြည်ဘူး ....
ဒါ့ကြောင့် မရိုက်ချင်ဘူး ....
ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို ...
အသည်းထဲ၊ နှလုံးထဲကနေ ...
ရုပ်ရှင် ထရိုက်လောက်အောင် သိတာသိပ်မရှိဘူး ....
ကျွန်တော် သိတဲ့အတိုင်း လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ....
ကျွန်တော် လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေ ...
သူတို့ ပေးနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲ လျှောက်ရှာနေကြတာ .....
ဦးဘဟိန်းတို့ ကိုလည်း ရှာမထားဘူး ....
ဒါတွေကို လိုချင်ပြီဆိုတော့ ဘယ်သူကပေးမှာလဲ ....
ဒါတွေမပါဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ရိုက်မလဲ ....
ဒါဟာ သူ့  ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲက လူတွေလေ ...
ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်တည်း အကြောင်း ရိုက်နေလို့တော့ ...
ဘယ်လိုလုပ် ရုပ်ရှင်ဖြစ်မှာလဲ ....
ဒါ့ကြောင့် ကျနော် နှစ်ကြိမ် ငြင်းတယ် ...
သူတို့ကတော့ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ပေးမယ် ပြောတယ် ...
အဲဒါဆို ပိုကောင်းတယ် ....
သူတို့ကို နှစ်နာရီလောက် ...
အာပေါက်အောင် ပြောရတယ် ...
ဒေါ်စုနဲ့ပြောရင် ငါးမိနစ်နဲ့ ....
ဟိုက သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် ....
မရိုက်နဲ့တော့ဆိုပြီး ပြီးသွားလိမ့်မယ် ......
ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းဖေ နှင့် အင်တာဗျူး မှ ....
From: Kamayut Media
မြန်မာလူငယ်ဒါရိုက်တာ သည်မော်နိုင် ရိုက်ကူးတဲ့ The Monk (ရဟန်း) ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဟာ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အထူးဆု ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ဘူခါရက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် anonimul International Independence Film Festival အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Premiere Special အထူးဆု ရရှိတာပါ။
မြန်မာ့ကျေးလက်က ကိုရင်ငယ်ဘ၀ကနေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ဇာတ်အိမ်တည် ထားတဲ့ အဲဒီဇာတ်ကားဟာ ပြသချိန် ၉၄ မိနစ်ရှိပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဒီနှစ် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပြသဖို့ လည်း ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။
A Window on Asian Cinema အာရှရုပ်ရှင်ပြတင်းဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပြသမှာဖြစ်ပြီး ဒီကဏ္ဍဟာ အရည်အချင်းရှိ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားသစ်တွေကို အဓိကရွေးချယ်ပြသတာ ဖြစ်ပါတယ်။
UNFC က ထွက်မယ်လို့ ခပ်ရှင်းရှင်းထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ … ကေအန်ယူ အဖွဲ့ ကြီး နဲ့…. အဘ စောမူတူးဆေးဖိုး တို့ ကိုတော့ …. လေးစား …. လေးစား
ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ကြီးကို ….
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ကြီး အဖြစ်နဲ့ …
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကာ
တိုင်းပြည်အကျိုး အတူသယ်ပိုးထမ်းရွက်ကြမယ် …..
လက်ရှိ စစ်အင်အားအပြင် …
တိုင်းရင်းသားတပ်တွေရဲ့ အင်အားပါ ပူးပေါင်းလိုက်ရင် …
အရှေ့ တောင် အာရှ မှာ အင်အားကြီးပြီး စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ …
ပြိုင်ဘက်ကင်း တပ်မတော်ကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်လာမယ်….
အခုလက်ရှိ သြ ၂၆ ရက်မှ ဒီနေ့အထိ ….
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ CHINLAND ဟိုတယ်မှာ လုပ်နေတဲ့ …
UNFC ပထမညီလာခံ အတွက် မက်ခဲ့ တဲ့ …
ကျွန်တော့် ရဲ့ ဆောင်းတွင်း အိပ်မက်လေးတစ်ခုပါ ….
အခုတော့ ဆပ်ပြာပူဖောင်းလို …..
ဖောင်းကနဲ ပေါက်သွားခဲ့ပါပြီလား …
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေနဲ့ ညှိနိူင်းတဲ့ အခါ….
တပ် ဖွဲ့ စည်းရေး အပိုင်းက တစ်မျိုး …
ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရပ်တည်မှု အတွက်က တစ်ဖုံ …..
နည်းလမ်းမျိုးစုံ စဉ်းစားပေးရမယ်ဆိုတာ …
အားလုံး နီးပါး နားလည်ကြပါတယ်…..
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေသွားနိူင်ဖို့ ….
လုံးဝ နီးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်နိူင်ပြီး ….
ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးကို လဲ ...
ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နိူင်မယ့် မူဝါဒတစ်ရပ်အဖြစ်….
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်များကို …..
BGF ( Border Guard Forces ) နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ များ နဲ့……
ဌာနေ ပြည်သူ့ စစ် အဖွဲ့ များ အဖြစ်….
ပြောင်းလဲဖွဲ့ စည်းသွားဖို့ အဆိုကိုလဲ ….
တပ်မတော် ဘက်က အကြံပြု …
ကမ်းလှမ်း တင်ပြခဲ့ဖူး ပါတယ်…..
အဲဒီ အဆိုပြုချက်အရ …
BGF အဖြစ် ဖွဲ့ စည်းမယ့် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ များဟာ ….
လက်ရှိ တပ်နေရာမှာ အခြေပြုခွင့်ရှိပါတယ်….
BGF တပ်ရင်းတစ်ရင်းကို …
တိုင်းရင်းသား အရာရှိ ၁၀ ဦး ……
စစ်သည် ၃၁၆ ဦးနဲ့တရားဝင်ဖွဲ့ စည်းပေးပါတယ်…
BGF တပ်မှူး ကို တပ်မတော် ဗိုလ်မှူး ရာထူးအဆင့် နဲ့ ……
ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဖြစ် တရားဝင် ခန့် အပ်ပေးပါတယ်…
တပ်မတော်က လက်နက် ရိက္ခာ …
လစာ စစ်ဝတ် အားလုံး အပြည့်အစုံထောက်ပံ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် နှစ်သက်ရာလက်နက် …
နှစ်သက်ရာ ယူနီဖောင်းကို …..
၀တ်ဆင် ကိုင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လဲ ခွင့်ပြုထားပါတယ်…
နိူင်ငံတော်အလံ ဒိုင်းတံဆိပ် တပ်ဆင်ရပါမယ်….
အဲ တပ်ရင်းမှာပဲ ……
တိုင်းရင်းသား တပ်မှူးရဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ….
တပ်မတော်က အရာရှိ ( ၃) ဦး နဲ့…
အခြားအဆင့် ( ၂၇ )ဦးဟာ…
ဋ္ဌာနချုပ် တပ်ခွဲမှူး ၊ တပ်ရေး ၊ တပ်ထောက် …..
ဆေး ၊ လစာကြပ် ၊ ရုံးစာရေးများ ၊ စီကျူ စတဲ့ တာဝန်များကို ….
BGF တပ် အနေနဲ့ …
နယ်မြေတွင်း တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ …..
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ...
ပြည်သူ့ စစ်နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကို ……
သတင်းပို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်….
လက်ရှိအနေနဲ့ တော့ …
BGF မူဝါဒကို လက်ခံတဲ့ တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့ များဟာ…..
မပခ မှာ ၃ ရင်း ၊ ရပခ မှာ ၂ ရင်း …
ရမခ မှာ ၁ရင်း ၊ တပခ မှာ ၄ ရင်း နဲ့ …..
ရတခ မှာ ၁၃ ရင်း ….
စုစုပေါင်း BGF တပ်ရင်း ၂၃ ရင်းထိ ....
ဖွဲ့ စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်….
တစ်ခါ …..BGF အတွက် အသင့်မဖြစ်သေးရင်လဲ….
ဌာနေ ပြည်သူ့ စစ်အဖြစ် ဖွဲ့ စည်းခွင့်ပြုပါတယ်…
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ၊ ဒုအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ အဖွဲ့ သားဆိုပြီး ...
တပ်လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို …
ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဖာသာ …
ဥပဒေနဲ့ ချိုးဖောက်ရင်တော့ အရေးယူခံရပါမယ်….
ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်……
တပ်ဖွဲ့ ကြီး တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ တော့…
၁၉၉၀ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး စယူကတည်းက …..
အစိုးရက ဘယ်လောက် ပံ့ ပိုးပေးခဲ့တယ်….
ဘယ်လောက် အလျော့ပေး လိုက်လျောခဲ့တယ်…
ပြည်သူလူထု ကလည်း ….
မြို့ တွေပေါ်မှာ သွားလာနေတဲ့…
လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ တွေကို …..
ဘယ်လောက် သည်းညည်း ခံပေးခဲ့တယ် …..
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် …..
ဘယ်လောက် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာနေခဲ့ပြီ ဆိုတာလဲ ……
အားလုံး အသိပဲ နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ် ….
ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ပါလဲ …..
ကိုယ့် စိတ်ကြိုက်ဆွဲတဲ့ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်လား ခင်ဗျာ…
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများမှ …
အလှည့်ကျ စစ်သေနာပတိချုပ်ခန့်အပ်ရန် …
စစ်ဦးစီးချုပ်များအား ရွေးချယ် ထားပြီးပြီတဲ့ လား ခင်ဗျာ …..
ခင်ဗျားတို့ ဖွဲ့စည်းလိုသည့် စစ်တိုင်းကြီးများအမည်နှင့် ….
စစ်တိုင်းကြီးများတွင် ပါဝင်မည့် ....
တိုင်းရင်းသားတပ်များ၏ အင်အား ….
တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း ရေးဆွဲထားပြီးပြီတဲ့လား ခင်ဗျာ….
အရင် ကိုလိုနီ သွေးခွဲစနစ်အရ …
တိုင်းရင်းသားတွေ ချည်းကိုပဲ ….
တောင်တန်းတပ်တွေ လို့ နာမည်တပ်ကာ …
သီးခြား သွေးခွဲ ဖွဲ့ စည်းပေးခဲ့ တာကို များ….
ပြန်ပြောင်း တမ်းတ နေပါသလားခင်ဗျာ….
ဒီတပ်တွေ အားကိုးနဲ့ ပဲ ….
လွတ်လပ်ရေး စ ရ ကတည်းက …
ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုပဲ …
မီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေခဲ့တဲ့ ….
ပြည်တွင်းစစ် ကြီးကိုလဲ အမှတ်ရော ရမိပါသလားခင်ဗျာ…..
အလှည့်ကျ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ….
တပ်မတော် မှာ ….
ဘယ် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်မှ …..
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ …..
သတ်မှတ်ချက် လုံးဝ မရှိပါဘူး….
ကြိုးစားရင် ခင်ဗျားတို့ လဲ …..
တပ်မတော်မှာ ၀င်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ……..
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်နိူင်ပါတယ်…..
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် ….
လက်ရှိ တပ်မတော်အရာရှိတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ……
ဖြတ်သန်းမှု အဆင့်တွေအားလုံးတော့ …
ခင်ဗျားလဲ ဖြတ်သန်း ရပါလိမ့်မယ်…..
လက်ရှိ ကာချုပ်ဟာ မွန် ဗမာ ဖြစ်ပါတယ်……
ဒုတိယဗိုလ် အဆင့်ကနေ ….
စီမံခန့် ခွဲမှု အတွေ့ အကြုံပေါင်းများစွာ ….
မတက်မနေရသင်တန်း ၅ မျိုး ဖြစ်တဲ့ ….
စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် …..
နိူင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ် …..
စတဲ့ သင်တန်းကြီး ၅ ခု နဲ့ ….
အခြား ပြည်တွင်း ပြည်ပ သင်တန်းပေါင်းများစွာကို
အဆင့်ဆင့် တက်ရောက်ကြိုးစားပြီးမှ ….
အင်အား ငါးသိန်းနီးပါး ရှိတဲ့ ခေတ်မီတပ်မတော် တစ်ခုရဲ့ ….
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာသည်….
သာမန် ကြိုးစားမှုနဲ့ တော့ မရနိူင်မှန်း…..
သုံးတန်း ကလေး တောင် စဉ်းစား တတ်ပါတယ်…..
စိတ်မဆိုးဘူး ဆိုရင်တော့ …
ဒီရာထူးက မဲနိူက်သလို အလှည်ှ့ နဲ့ ပေးရအောင်…..
ရွာ ဘုရားပွဲက ဂေါပက လူကြီး ရာထူး မဟုတ်ပါဘူး ….
ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ …
မဖြစ်မနေ အုပ်ချုပ်ရမှကို ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့….
အခု အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့….
ယိုးဒယား နိူင်ငံ မှာ…..
ပက်ပုန်း ရပ်ကွက် ဆိုတာရှိပါတယ်….
အဲဒီမှာ အလှည်ှ့ ကျ စစ်သေနာပတိ လုပ်ဖို့ ….
UNFC ရဲ့ မူဝါဒ ကို ....
ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့် ကျင်ပြီး ….
အာ့ မူအတိုင်းလုပ်မယ်ဆို …..
UNFC က ထွက်မယ်လို့ ခပ်ရှင်းရှင်းထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ …
ကေအန်ယူ အဖွဲ့ ကြီး နဲ့….
အဘ စောမူတူးဆေးဖိုး တို့ ကိုတော့ ….
လေးစား …. လေးစား …. ။ ။
12:00 ပြန်လည် ရှင်းလင်းချက်များ No comments
အခုလို ပေါလစ်တိုက်ပေးလို့ ပြောင်လက် လာတာကို ကျေးဇူးတင်ပါ့ ဗျာ ။ တမင်ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်တော့ မရှိပါဘူး။ ကြုံသလို တိုင်းကျိုးပြည်ပြု ဘဲ ဖြေကြားဆောင်ရွက်သွားမှာပါ ခင်ဗျား…..
From: U Hla Swe
11:00 ဗဟုသုတ No comments
မွေးနေ့ပွဲ၊ ပါတီပွဲတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ တစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက် သောက်ပြီး မူးသွားတဲ့အခါ သူတို့အချင်း ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုစကားတွေဟာ မူးတဲ့အချိန်မှသာ ထွက်လာတတ်ကြတာဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအများစု မူးလေ့ရှိချိန်တိုင်း ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀ယောက်မှာ ၇ယောက်လောက်က အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်လို့ စစ်တမ်းကောက်ချက်အရသိရပါတယ်။
၁။ငါနင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မမုန်းခဲ့ဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ နင်ကဘာလို့အဲ့ဒီလို ထင်နေရတာလဲ။ မိန်းကလေးအချင်းချင်း တစ်ခါတစ်လေ ကတောက်ကဆဖြစ်ဖူးတာတွေကို ဒီအချိန်မှာ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လေ့ရှိပြီး ခုတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
၂။တို့နောက်ရက်တွေ ထပ်တွေ့ကြမယ်လေ။ အရင်တစ်ခါကပြောပြီး ဘာလို့အဲ့ဒီအစီအစဉ် မဖြစ်သွားရတာတုန်း။ မသောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ ခပ်တန်းတန်းနေတဲ့သူတွေကိုလည်း ခုလို ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတတ်ကြပါသေးတယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ကျရင်တော့ သင့်ဖုန်းထဲမှာ မနေ့က အတူတူ သောက်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို သင်ကိုယ်တိုင်မှတ်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
၃။ယောင်္ကျားတွေက သောက်သုံးကို မကျဘူး။ မိန်းကလေးအချင်းချင်းမို့ ယောင်္ကျားလေးတွေကို အပြစ်ပြောတာ မူးနေချိန်တိုင်း သူတို့လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပါပဲတဲ့။
၄။ငိုချလိုက်တော့မယ်။ မရတော့ဘူး။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ညကဘာ့ကြောင့်ငိုတယ်ဆိုတာ။ ဘာအကြောင်းအရာကြောင့် ငိုမှန်းသိချင်မှ သိပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ ငိုချပစ်လိုက်တာပါပဲ။
၅။လွဲနေတဲ့လူတွေနဲ့ မနေချင်တော့ဘူး။ အမိုက်စားနေရာတစ်ခုခု သွားချင်တယ်။ တစ်နေရာမှာ သောက်နေတုန်း နောက်တစ်နေရာကို ကြိုစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ့ထက်မိုက်တဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်း ပါးစပ်ဖျားက မချတတ်ကြပါဘူး။
၆။ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ်ဟေးးးးးးးးးးး။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။ မူးနေတဲ့ပုံဆိုလည်း အမှတ်တရဖြစ်တာပဲဆိုပြီး selfie တွေ မနားတမ်း ရိုက်တော့တာပါပဲ။
၇။နင့်ချစ်ချစ်နဲ့ ဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲ။ နင်နဲ့ဟိုတစ်ယောက်ဘယ်တုန်းက ပြတ်သွားတာတုန်း။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူ့ဘဲ၊ ကိုယ့်ဘဲအကြောင်း ပြောကြဆိုကြ ဝေဖန်ကြရတာလည်း အမောပေါ့။
၈။ငါနင့်ကို တော်တော်ချစ်တယ်။ နင်က ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းပါပဲ။ အခါပေါင်းများစွာ ပါးစပ်ဖျားက မချတမ်း ဒါကဲဆက်တိုက်ပြောနေပါလိမ့်မယ်။
10:00 ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ No comments
မေး။ ။ ကာလသား ရောဂါဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ လိင်တူ လိင်ကွဲ ဆက်ဆံရာက ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေကို “လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါများ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတော့ “ကာလသားရောဂါ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကာလသားရောဂါအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ၊ ဂနိုရောဂါ၊ ရှန်ကရွိုက်၊ လင့်ကျိတ်ရောင် ရောဂါ၊ လိင်အင်္ဂါ ရေယုန်၊ လိင်အင်္ဂါ မက်ခရု၊ လိင်အင်္ဂါဝဲ၊ ရီဖြူဆင်းရောဂါနဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ အပါအဝင် ရောဂါ အမျိုးပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ရှိပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါ တန်ဆာ အနီးတဝိုက်မှာ လှိုက်စားနာ၊ ပွန်းပဲ့နာ၊ အဖု၊ အပိန့်၊ အကျိတ်၊ အလုံး တွေဖြစ်တာ။ ဆီးသွားရင် ပူတာ၊ နာကျဉ်ကိုက်ခဲတာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ စအို၊ မိန်းမကိုယ်က ညောင်းကျတာ၊ ရိဖြူရိနီ ဆင်းတာ၊ လိင်အင်္ဂါ အနီးတဝိုက်မှာ ရောင်ရမ်း နာကျင် ကိုက်ခဲတာတွေဟာ ကာလသား ရောဂါလက္ခဏာ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကာလသားရောဂါနဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ဘယ်လို ဆက်စပ်နေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ရောဂါ နှစ်ခုစလုံးဟာ လိင်ဆက်ဆံရာကနေ အဓိက ကူးပါတယ်။ ရောဂါပိုး ရှိတဲ့ သွေးသွင်းမိရင် ကူးတယ်။ ရောဂါရှိနေတုန်း၊ ဆီးပူညောင်းကျ ဖြစ်နေတုန်း လိင်ဆက်ဆံရင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးဟာ ပိုပြီး အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ကာလသား ရောဂါရှိတဲ့သူဟာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါလည်း ရှိလာဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်။
မေး။ ။ ကာလသား ရောဂါကို ပျောက်အောင် ကုသနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကာလသား ရောဂါ တော်တော်များများကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးဝယ်သောက်တာတို့၊ ဆေးမြီးတို သုံးပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကုတာတို့၊ မလုပ်ပါနဲ့။ ငွေလဲကုန် အန္တရာယ်လဲ ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် သောက်ပါ။
မေး။ ။ ရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်လာရင် ဘာလုပ်ရပါမလဲ။
ဖြေ။ ။ ရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်လာရင် ဖြစ်ဖြစ် ရောဂါ ရှိတယ်လို့ သံသယ ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းနဲ့ အမြန်ပြပါ။ ရောဂါ မပျောက်မခြင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက် (သို့မဟုတ်) လိင်ဆက်ဆံဖက် အဖော်ကိုလည်း ဆေးကုသဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ သူ့ဆီက ရောဂါ ပြန်မကူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကာလသား ရောဂါကို စနစ်တကျ မကုရင် ဘာဖြစ်ပါမလဲ။
ဖြေ။ ။ ကာလသား ရောဂါ ရှိတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံရဖို့ အန္တရာယ် အလွန်များတဲ့အတွက် သူများတွေထက် အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါပိုပြီး ဖြစ်လွယ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ သားပျက်သားလျောတာ အပြင် ကလေးအသေ မွေးနိုင်တယ်။ ကာလေး အရှင်မွေးခဲ့ရင်လည်း ရောဂါပိုးတွေဟာ ကလေး မျက်လုံးထဲဝင်ပြီး မျက်စီကွယ်သွားနိုင်တယ်။ သားအိမ်ထဲပိုးဝင်ပြီး သားသမီး မရနိုင် ဖြစ်တတ်သလို သားအိမ်ကင်ဆာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်ပြီး ဆီးမသွားနိုင်အောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုး တွေကြောင့် သုတ်မထုတ်နိုင်တဲ့ အတွက် သားသမီး မရနိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့မှာ လိင်တံကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့အထိ ခံစားရပါတယ်။ ရောဂါပိုး ဦးနှောက်ထဲ ရောက်သွားရင်လည်း ရူးသွတ်တတ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကာလသား ရောဂါ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရပါမလဲ။
ဖြေ။ ။ လိင်အပျော်အပါး ရှောင်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံဘက် အဖော်များတာ၊ လိင်ဆက်ဆံဘက် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပြောင်းတာ၊ ငွေကြေးအတွက် လိင်ဆက်ဆံတာတွေဟာ ရောဂါ အလွယ်တကူ ရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေ မရှောင်နိုင်ရင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (မြန်မာ) တို့ ပူးပေါင်းထုတ်ဝေသော “HIV/AIDS အမေးအဖြေများ” ဟု အမည်ရသေ စာအုပ်မှ ပြန်လည် ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပုရိသတို့အား ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ မိန်းကလေးများ ဆေးမသုံးဘဲ ရင်သားကြီးလာအောင် လုပ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ပါဝင်ပတ်သက်သော မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖော်ထုတ်နိုင်
စိတ်ကြွဆေးပြားများအ ရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေသည့်လုပ် ငန်းရှင်တစ်ဦးပါဝင်သော မူးယစ် ဆေးရောင်းသူအချို့ကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင်မူးယစ်ရဲတပ် ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင် ဆိုင်မှုများကိုလည်း စစ်ဆေးနေ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
သြဂုတ် ၂၉ ရက် ညနေက မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဗညားဒလလမ်းပေါ်တွင် ကားဖြင့် စိတ်ကြွဆေးပြားတစ်သိန်း သယ် လာသူ အမျိုးသားနှစ်ဦးကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် မူးယစ်ရဲတပ် ဖွဲ့အရာရှိများက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းရှင်အိမ် သို့ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့သည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်များမှာ Natur−al Force ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် လုပ်ငန်းများစွာ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကို ၎င်းနေထိုင်ရာအိမ်တွင် စိတ်ကြွဆေးပြား နှစ်သိန်းကျော်၊ သေနတ်နှစ်လက်တို့ ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့သည်။
‘‘အခုဖမ်းမိတဲ့အမျိုးသမီးကို စစ်နေတုန်းပဲ။ သူ့ယောက်ျားက တော့ ခရီးထွက်နေလို့ ဖမ်းမမိ သေးဘူး။ ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတ ခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တော့ ဆက်စပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လိုက်သိမ်းနေပြီး အသေးစိတ်ကို စစ်နေတုန်းပါ’’ ဟု ပြောကြားသည်။
ကုမ္ပဏီမှ သင်္ဘောများ ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပကုန်စည်ပို့ ဆောင်သည့်လုပ်ငန်း၊ ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အုတ်သဲကျောက် လုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ကိုင်နေပြီးပိုင် ဆိုင်မှုများကိုစိစစ်နေကြောင်းသ တင်းရရှိသည်။ လတ်တလော၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ဖွယ်ရှိသည့် သင်္ဘောငါးစီးကို ရဲတပ်ဖွဲကစစ်ဆေး နေသည်။
ဖြစ်စဉ်မှ စုစုပေါင်းစိတ်ကြွဆေးပြားသုံး သိန်းကျော်နှင့် ဘိန်းဖြူ ၃၅၀ ကီလို သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နှင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန ချုပ်က မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ် သည့် လုပ်ငန်းများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်နေကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လုပ်ငန်း များစွာလုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဦးဆောင်သည့် မူးယစ်ဆေးရောင်းသူများကို ဖမ်းဆီးနိုင် ခဲ့သည့်အမှုဖြစ်သည်။
မော်ရိုကိုတွင် ဓားထိုးခံရသည့် ဗြိတိန်မိန်းကလေး မိမိအသက်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်နေသော်လည်း သူငယ်ချင်းများနှင့် Selfie ပုံ ရိုက်ယူခဲ့